Maxaad ka taqaan lammaanaha Turkiga ah ee ka danbeeyay soo saarista Tallaalka lagu farxay ee Covid-19? | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Prof. Ugur Sahin iyo xaaskiisa Dr. Özlem Türeci oo asalkoodu yahay Turkiyii heysta dhalashada Jarmalka ayaa ka dambeeyay soo saarista tallaalka cudurka Covid-19 ee ee dunida farxadda geliyay, kadib markii uu wax ku ool noqday 90% dadkii lagu tijaabiyey.
Guusha ay gaareen labadan Lammaane aya asi weyn looga hadal hayaa warbaahinta dunida. Waxay noqdeen dhaqtarrada nasiibka u yeeshay inay noqdaan kuwii ugu horeeyay ee tallaalkooda uu noqday kan ugu waxtarka badan ilaa 11 tallaal oo tijaabadoodu ka socoto dalal kala duwan.
Prof. Ugur Sahin oo Turkiga ku dhashay, waxay da’diisu tahay 55, waana agaasimaha guud ee shirkadda tiknoolojiyadda caafimaadka ee lagu magacaabo BioNTech – oo laga leeyahay Jarmalka. Shirkaddan waxay si wadajir ah isula aasaaseen xaaskiisa Özlem Türeci, oo 53 jir ah iyo macallinkiisii hore, Barfasoor Özlem Türeci, oo u dhashay waddanka Austria, kuna takhasusay cudurka kansarka.
Barfasoor Sahin iyo Dr Türeci waxay shirkadda BioNTech ku aasaaseen magaalada galbeedka Jarmalka ku taalla ee Mainz, sanadkii 2008. Labadoodaba waxaa dhalay waalidiin qaxootinnimo ku tagay Jarmalka. Ugur Sahin afar sano ayuu jiray markii ay qoyskiisa u qaxeen Jarmalka, xilligaasoo ay hooyadiis u tageysay aabihiis oo ka shaqeynayay warshad ku taalla magaalada Cologne.
Ugur Sahin wuxuu cilmiga caafimaadka ka bartay jaamacadda Cologne, wuxuuna sheegay in mar walba uu xilli dambe ku gaadhi jiray sheybaarka jaamacadda. Ilaa maanta shaqada ayuu uga sii dambeeyaa dadka kale.
Ka hor inta uusan dillaacin cudurka safmarka ah, BioNTech waxay si gaar ah cilmibaaris ugu sameyn jirtay dawooyinka loo raadinayo kansarka, laakiin ilaa hadda ma jirto daawo ay soo saartay oo la asnixiyay. Özlem Türeci iyaduna waxay soo kordhay aabbeheed oo dhakhtar ah, kaasoo saameyn ku yeeshay xirfadda ay qaadatay, maadaama uu guriga ku sameysan jiray shaqooyinka qaar.
Dhaqtarrada Sahin iyo Dr Türeci waxay ku takhasuseen kobcinta awoodda difaaca jirka, markii horena waxay shaqadooda diiradda ku saari jireen caawinta bukaannada cudurka kansarka. Waxay horay u isticmaaleen qalab loo yaqaanno messenger RNA (mRNA) si ay u sameeyaan dawooyin gaar ah oo lagu durayo unugyada jirka, kuwaasoo kaddib difaaca qofka u tababaraya inuu weeraro unugyada wata cansarka.
Barfasoor Sahin ayaa gartay in habka ay u shaqeeyaan qalabka mRNA iyo sida ay dhismaha uga caawiyaan difaaca loo adeegsan karo dagaalka ka dhanka ah fayraska corona. Ujeeddadu waa in unugyada difaaca lagu abuuro burutiinno weerari kara fayraska islamarkii uu jirka soo galo.
Markii warka ku saabsan inuu Coronavirus dillaacay bishii January laga soo tabiyay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, shirkadda BioNTech howsheedu meel wanaagsan ayeyba sii mareysay, maadaama ay shaqada lagu abuurayo dawooyinkaas sii billowday sanadkii 2018-kii. Sidoo kale shirkadda Pfizer ayey waqtigaas isla billaabeen diyaarinta tallaal loogu talagalay hargabka.
Isniintii waxay mas’uuliyiinta BioNTech shaaciyeen in waxtarka tallaalkooda uu ka sarreeyo 90% – saameyntiisuna ay muuqaneyso hal isbuuc kaddib markii la isticmaalo tallaalka labaad. Qeybta ilaalinta difaaca jirkana waxay billaabaneysaa 28 maalmood kaddib marka la isticmaalo tallaalka koowaad.
Shirkaddoodu wuxuu qiimaheeda sare u kacay shan laab markii la shaaciyey waxtarka tallaalka ay soo saareen, waxayna hadda suuqa saamiyada ka gaartay $21 bilyan oo doolar, halkii ay sanad ka hor ka ahayd $4.6 bilyan oo doolar.
Ugur Sahin and Dr. Özlem Türeci
Previous articleFarmaajo, Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif Qoraallo isku mida kasoo saaray Doorashadii Cali Guudlaawe (Akhriso)
Next articleMaxamed Cabdi Waare: “Uma hambalyeynaayo Madaxweyne Cali Guudlaawe iyo Yuusuf Dabageed, waan..”